Ebe nleta saịtị World Heritage na Spain | Akụkọ Njem
Carmen Guillen | | Spain obodo, Córdoba, Getaways, Granada, Sevilla
Abụ m otu n'ime ndị na-ahọrọ ịga ụfọdụ ebe ndị Spain tupu ịmara ebe ndị ọzọ na mba ọzọ, nke nwekwara mmasi ha, a ghaghị ikwu ihe niile. Ihe kpatara ya dị mfe: na Spain anyị nwere ike ịga site na ugwu ruo na ndịda ma ọ bụ site na ọwụwa anyanwụ ruo ọdịda anyanwụ, na-achọta ihe ịchọ mma dị egwu nke kwesịrị aha ọtụtụ n'ime ha nwere: Ihe Nketa Worldwa. Nke ahụ bụ ihe isiokwu anyị taa gbasara, ndụmọdụ maka njem, obodo ma ọ bụ ime obodo, na-achọ saịtị ndị a.
Taa, na Actualidad Viajes, anyị na-enye naanị 5 n'ime ha, mana enwere ọtụtụ ndị ọzọ ... Are na-anọnyere anyị iji debe ha, ọbụlagodi ugbu a, site n'ebe dị anya?
1 Alhambra, na Granada
3 Ọwara mmiri nke Segovia
4 Seville na akụ ya
Alhambra, na Granada
N’oge na-adịbeghị anya, ahọpụtara Granada dịka obodo kachasị mma na Spain. Echere m na m na-echeta na ọ na-asọmpi ikpeazụ na ịma mma Andalusia ọzọ, Córdoba. Agara m obodo abụọ ahụ na-amasị m abụọ, mana ee, Granada gbagwojuru ya anya (dịka ọ masịrị m).
Ọ dị mma, n'ime Granada anyị nwere ike ịchọta otu n'ime ụlọ eleta kachasị na Andalusia na Spain, n'ozuzu: Alhambra. Ma hụrụ si Uche nke Saint Nicholas, ma ọ bụ n'ezie ịzọ ụkwụ n'elu ala ya, bụ ụlọ ị ga-ahapụ site n'ịtụ egwu.
O wuru ya site na Narị afọ nke XNUMX, ke 889 Sawwar ben hamdun Ọ ghaghị ịgbaba na Alcazaba ma mezie ya n'ihi ọgụ obodo ndị na-ada n'oge ahụ na Caliphate nke Cordoba, nke Granada nọ.
Ọ bụrụ n ’ihi na ị nweghị ike ịga ya, echegbula onwe gị, site na nke a página, ị ga-enwe ike ịmegharị njem nlegharị anya ma mụta ihe omimi miri emi nke ụlọ ihe atụ a.
Anyị kpọtụrụ ya na mbụ mgbe Alhambra nwere nnukwu mmasị anyị, nke ahụ bụ na obodo akụkọ ihe mere eme enweghị ike ịhapụ aha anyị taa. E chebere ụlọ akụkọ ihe mere eme ya na UNESCO ọtụtụ afọ gara aga na ọ bụ naanị site na ịbanye na akwa mmiri Rom, ọmarịcha ya Mosquelọ alakụba wee dobe n'otu ụlọ mmiri tii nke ebe ndị Juu Cordoba nọ, anyị na-aghọta nhọpụta kwesịrị ya dị ka World Heritage Site.
Na mgbakwunye na saịtị ndị a kpọtụrụ aha ugbu a, ọ bụrụ na ị gaa Córdoba ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ị ga-aga visitlọ Nzukọ, ndị San Basilio agbata obi ma ọ bụ Alcázar de los Reyes Cristianos.
Ahụbeghị m ya mana m chọrọ n'ezie ọwa mmiri a. Nnukwu ihe owuwu a bụ ọrụ ndị Rom, dị ka ọtụtụ n'ime ihe anyị ka na-echekwa na Spain na ihe na-amasịkarị mgbe ị hụrụ ya, dị ka ndị enyi gara leta ya si kwuo, bụ ogologo ya. Na foto ndị a na-egosipụtakarị na ya, a naghị anabata oke ya n'ezie, ọwa mmiri ahụ enweghịkwa ihe ọzọ 15 kilomita n'ogologo.
A chọtala ya echekwara nke ọma ọ bụkwa akara ngosi nke nnọchiteanya nke Segovia, na-enweghị mgbagha. Otu eziokwu nke na-adọta uche dị ukwuu na m mụtara n'oge na-adịbeghị anya bụ na n'etiti nkume na nkume enweghị ụdị putty ma ọ bụ ngwa agha nke na-eme ka ha dị n'otu, mana a na-etinye ha na usoro nke ịkwanye na ibu nke mere ọtụtụ narị afọ mgbe ahụ anyị ga-aga n'ihu iji chebe ya. Ndị ara ndị Rom a!
Seville na akụ ya
Seville anọghị n'azụ na ogo nke akụ kachasị mma nke Andalusia na ebe a anyị nwere ya na ndepụta ahaziri anyị. N'ime ya anyị nwere ike ịchọta ụlọ dị ka ihe nnọchianya dị ka eleta dị ka ndị mara mma Giralda, Katidral ahụ, Alcazar o Archive nke ndị Indies.
Ihe owuwu nke ndị Indies bụ ihe owuwu maka ndị ahịa na ndị ahịa na-agafe obodo ahụ ma na-edebe faịlụ na akwụkwọ banyere kọntinent ọhụrụ ahụ ugbu a.
Alcázar bụ ụlọ ndị Alakụba na-echekwa osimiri Guadalquivir. Ulo abuo akowara ruo ugbua nwere oke miri emi na osimiri n'ihi oru ha na ya.
Ọ na-ekwu maka Salamanca ọ na-ekwu maka ochie na banyere mahadum ya. A kwalitere nke a site na ụdị nke Mahadum nke Bologna, ma kụọ mkpụrụ nke ihe ọmụma ya na ụlọ Gothic, Renaissance na Baroque, nke ya na Plaza Mayor na Katidral (Old na New), bụ akụkụ nke obodo ochie nke UNESCO na-echebe. Ọ bụ ebe pụrụ iche ịga leta n’oge a n’afọ: udu mmiri-udu mmiri.
Anyị nwere olile anya na saịtị ihe ngosi 5 ndị ​​a nke ụwa ga-adaba na mma ha ma n'oge na-adịghị anya ị ga-abịa leta gị. Dịka m kwuru, enwere m Segovia na-echere. N'oge na-adịghị anya
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » Ebe nleta World Heritage saịtị na Spain
8 European obodo ileta na oyi
Ihe ị ga-ahụ na Shiraz, Iran